Nagu saabsan - Shijiazhuang Hantex International Co., Ltd.
waxaan ku takhasusay dhoofinta Dharka, alaabada guryaha, alaabooyin kala duwan oo Dhiirrigelin ah macaamiisha adduunka oo idil.
Hantex International Co. Ltd. waxay ku taalaa Magaalo madaxda gobolka Hebei, xarun caan ku ah soo saarista Dharka iyo Dharka ee Shiinaha. Wadada weyn, waa 3 saac woqooyi woqooyi ilaa Madaarka Beijing, iyo 6 saac woqooyi-bari ilaa Dekada Tianjin, iyo 8 saacadood Bariga ilaa Dekada Qingdao.
Khibrad 15 sano ah oo aan ku leenahay ganacsiga shisheeyaha, waxaan ku takhasusay dhoofinta Dharka, wax soo saarka Qoyska, waxyaabo dhiirrigelin kala duwan ah macaamiisha adduunka. Sidoo kale waxaa naloo soo saaray si guul leh Farsamo iyo alaab elektaroonik ah tan iyo sanadkii 2008. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Dharka ， Dharka guryaha, Dharka, Guud ahaan, Jaakadaha, Shaatiyada, Saraawiisha iyo Gaagaaban, Dharka roobka, Tuurista ama waxyaabaha la ilaaliyo iyo qalabka makiinadaha, Bambooyin, Led LD , Solar windmill ， Hadiyadaha qoraxda, iwm iibkeena sanadlaha ah waa kudhowaad $ 8 milyan.
Maaddaama aan nahay shirkadda hoggaamineysa dhoofinta, waxaan si toos ah u dhexgalineynaa tikniyoolajiyadda, warshadaha iyo ganacsiga. Waqtigan xaadirka ah, waxaan lahaan jirnay seddex wershadood, mid dharka, mid loogu talagalay dharka caaga ah iyo mid loo yaqaan 'Cast'. Sidoo kale waxaan haynaa in ka badan 50 warshadood oo ku hawlan qalabka Row, qalabka iyo warshadaha oo ah lamaanayaal wanaagsan oo ku baahsan Shiinaha.
Ka-shaqeynta Gudaha ee Tayada
Waxaa jira 3 QC waaxdeena ganacsiga iyo 2 QC dhammaan warshadeena. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan si taxaddar leh u xakameyno tayada oo aan u hubinno bixinta waqtiga.
Waxaan kuu balanqaadeynaa inaan ku siino
Bayaanka Hadafka Shirkada
3) Dharka Shaqada, sida Shaati, Cape iyo Apron, Jaakad iyo Parka, Saraawiil, Gaagaab iyo Guud ahaan, iyo sidoo kale
noocyada Dharka milicsiga, kuwaas oo leh Shahaadooyinka CE, EN470-1, EN533, EN531,
BS5852, NFPA2112 iyo ASTM D6413.
1) Adeeg Aad u Fiican, Tayo Sare iyo Qiimo Tartan Badan
2) Si dhakhso ah uga jawaab, Muunad 7 maalmood gudahood ah, Gaarsiinta waqtiga loogu talagalay.
3) Amar yar oo la aqbalay.
Adeeggu wuxuu abuuraa qiimo, xirfadle wuxuu gaaraa sumadda
Waxaa la aasaasay 2008, Hantex wuxuu ku yaal magaalada Shijiazhuang ee Gobolka Hebei, oo ah xarun muhiim u ah dharka iyo warshadaha dharka ee Shiinaha. Waa hal saac magaalada Beijing iyadoo la raacayo tareenka Xawaaraha Sare. Gawaarida waa weyn, waa afar saacadood Port Tianjin iyo lix saacadood ilaa Port Qingdao on Highway.
Khibradda 20years ee ganacsiga caalamiga ah, waxaan ku takhasusay dhoofinta inta badan Dharka jilicsan, Dharka Ski, Dharka Hooska, Dharka Roobka, Dharka Shaqada iyo Alaabada Qoyska ee Yurub, USA iyo Koonfurta Ameerika, Afrika, Koonfurta-bari Aasiya iyo Bariga Dhexe, iwm
Maaddaama aan nahay mid ka mid ah shirkadaha wax dhoofinaya, waxaan qabannaa in ka badan 100 warshadood oo ah lamaanayaal wanaagsan oo ku baahsan Shiinaha, kuwaas oo ku hawlan dharka, Dharka caagga ah, Dharka, Qalabka iwm.
Bandhigga Carwada Canton
Fadlan ka baaraandeeg qolkayaga show-ga si aad u hesho waxaad dalbato, ka dib maantana email noo soo dir. Weydiimahaaga si weyn ayaa loo qadarin doonaa oo amarada OEM / ODM waa la aqbalaa.
Fakis. + 86-311-87823360